Xildhibaan C/raxmaan Xoosh Jibriil oo Talooyin Muhim ah u Jeediyey Dawlada Cusub, Sheegayna In Nooca Federaalka Dalka Lagu Dhaqayo Ay u Taalo Soomaalida | Somali - Diaspora
Xildhibaan C/raxmaan Xoosh Jibriil oo Talooyin Muhim ah u Jeediyey Dawlada Cusub, Sheegayna In Nooca Federaalka Dalka Lagu Dhaqayo Ay u Taalo Soomaalida
Xildhibaan C/raxmaan Xoosh Jibriil oo Wareysi siiyey Moment Media Group oo tilmaamay Halista Dastuurka Cusub
Muqdisho (MMG) Wasiirkii hore ee Wasaaradda Dastuurka iyo Arimaha Federaalka Soomaaliya C/raxmaan Xoosh Jibriil oo haatan ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa wareysi uu maanta siiyey Moment Media Group wuxuu kaga hadlay aragtidiisa isbedelka dalka ka dhacay isagoo sheegay inuusan waxba ka qabin tirada yar ee golaha wasiirada Soomaaliya.
Xildhibaan Xoosh oo aan weydiinay in xildhibaanada baarlamaanka ku jira qaarkood ay mucaaradsanaayeen in golaha wasiirada ee qabyada ah la geeyo baarlamaanka ayaa sheegay inay jireen xildhibaano aragtidaasi qabay ayna ku kala duwanaayeen sababta hase yeeshee hadda uu u arko in xukuumadda ay shaqeyn karto uuna muuqdo isbedel dalka.
Talooyin ku socda xukuumadda cusub?
Xildhibaanka oo ay Moment Media Group weydiisay haddii uu talo u jeedinayo xukuumadda raysul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon ayaa waxaa uu sheegay inuu ugu horeyn u jeedinayo in xukuumada ay culeys iyo waqtiba geliso amaanka sida ku jirtay qorshihii lixda tiir ee uu soo bandhigay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
1- Kan ugu horeeyo waa in la dhameystiro amaanka dalka.
2- In maamulo ku-meelgaar laga sameeyo degmooyinka iyo gobollada Al Shabaab laga saaray si dadka ay u helaan adeegii bulshada, tan ugu horeysana in dadka ay heli karaan maamulo madani ah laga bilaabo Hiiraan, gobolada dhexe, Baay, Bakool, Afgooye, Marka illaa Jubbooyinka. Waana in maamulada ay ka koobnaadaan maamulka madaniga ee rayidka ah oo uu ku jiro garsoorka iyo kuwii militariga.
3- Tan saddexaadna ee loo baahan yahay waa in meelaha dawladu ay ka taliso oo dhan ay ka bilowdo canshuur qaadis maxaa yeelay dawlad gacan hoorsaneyso waa loo talinayaa weligeed, sidaa darteed sida kaliya ee dawlada cagaheeda ugu istaagi karto waa inay bilawdaa inay canshuur qaado.
Ka arinsiga nooca federaalka Soomaaliya
Halkaas ka Akhri Ka arinsiga nooca federaalka Soomaaliya
Xildhibaan C/raxmaan Xoosh oo ahaa wasiirkii ka masuulka ahaa meelmarinta dastuurka federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay Moment Media Group weydiisay bal sida uu u arko nooca federaalka Soomaaliya ee ku haboon maadaama ay jiraan aragtiyo kala duwan oo iska soo horjeeda oo ay dadka ay ka qabaan hirgalinta nidaamka federaalka cusub.
“Waa runtaa xasaasiyad badan ayaa laga qabaa federaalka Soomaaliya, annaga hadda markaan dastuurka ka soo shaqeynaynay awood qeybsuga dawladaha sameysmi doona ee federaalka waa in dib loo dhigaa inta ay ka soo sameysmayaan, markay soo sameysmaan iyaga inay ka xaajoodaan marka taa lafteeda waxay u baahan tahay wadatashi badan ayey u baahan tahay wax hal mar iska sameysmaaya mahan.” ayuu yiri C/raxmaan Xoosh Jibriil.
“Hadda waxaan heynaa Puntland, Galmudug oo xoogaa dhameystir laga rabo inay soo dhameystirto, inta kale [maamulada kale] intay qaadaneyso sameyntooda waa arrin xaajooyin badan u baahan wax xoog [force] lagu sameyn karana mahan, markaasi waxaan rajeynayaa in wadatashi badan uu ka dhaco.” ayuu yiri wasiirkii hore ee dastuurka dawladii ku-meelgaarka.
“Noocee federaal baad is leedahay Soomaaliya way qaadan kartaa, illeen waxaa jira noocyo kala duwan oo hababka federaalka ah?” ayaan weydiinay xildhibaan C/raxmaan Xoosh Jibriil.
“Federaalka wadamo badan ayaa qaba, laakiin federaalada jira way kala duwan yihiin, qaarbaa waxay yihiin federaal adag sida Canada iyo Jarmalka oo kale, qaarbaa ah federaal fudud sida Kenya ay ui sameysatay dawlad kala furfurka [devolution] taasna waxay u taalla ummada Soomaaliyeed inay ka wada xaajooto oo ay ka wada hadasho si laab la-kac ahna [emotional] ma u baahno in lagu sameeyo .” ayuu ku soo gabagabeeyay xildhibaanka hadalkiisa.
Dawladda ay Hoggaamiyaan Calasow, Shirdoon iyo Jawaari oo aan weli ka jawaabin Hadalkii Qareen Maraykan ah oo ku saabsanaa Badda Soomaaliya – 200 vs 12-miles Madaxweyne Sh Shariif ma la tabay mise anaa mooday?